‘नेकपालाई विदेशी राजदुतले आदेश दिने ?’ :सांसद मण्डल
विराटनगर, असार २८–पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य शिवकुमार मण्डलले नेकपाको आन्तरिक झागडा विदेशी राजदुतले मिलाउन खोज्नु दुखद भएको बताएका छन् ।
सत्तारुढ दल नेकपाकै केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका सांसद मण्डलले प्राइमटाईम्सम टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा कुरा गर्दै दुई तिहाइससहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दललाई सहसचिव स्तरका विदेशी राजदुतले आदेश र सुझाव दिनु दुखद भएको बताएका हुन् ।
नेकपाका शिर्षस्त नेताहरुसँग चिनका राजदुतले भेटेको प्रसंग कोट्ुयाउँदै नेता मण्डलले नेपाल र नेकपाको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप भइरहेको दावी गरे ।
‘कुनै वेला देशमा विशिष्ठ सहमतिको बेला आउँथ्यो तब कुरा मिलाउन भारतको राजदुत आउँथे । आज चिनका आएका छन् । कुनै दिन अमेरिकाको आउलान् । जहिले सम्म ठाउँ दिन्छौँ त्यतिबेलासम्म आइरहन्छन् । समस्या समाधानमा विदेशिलाई हामीले मगाएको हो ।’ उनले भने,‘हाम्रो पार्टी भित्रको समस्या हल गर्न चिन र भारतको राजदुत चाहिने ? हामी त्यसो भए नालायक भयौँ ? अर्काले आएर समस्या हल गरिदिनुपर्ने ? आज सम्म गर्दै आयौँ । यस कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? आज मुलुकमा दुइ तिहाईसहितको पार्टीले देश चलाईरहेको छ, सहसचिव स्तरको एृउटा राजदुतले आदेश र सुझाब दिन आउँछ । यो गतिविधि नैतिक हिसाबले शिर ठाडो हुने ठाउँ हो त ? हामी कामै नलाग्ने, हामी सँग क्षमतानै छैन ?’
उनले नेकपा भित्रको अन्तरविरोध व्यक्तिवादी प्रवृत्तिका कारण उत्पन्न भएको बताए । नेता मण्डलले पार्टी भित्र सामुहिक नेतृत्वको अभ्यास आजको आवश्यकता भएको बताउँदै स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको एजेण्डा पनि सोहि भएको बताए ।
उनले जारी स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका लागि भन्दा पनि सामुहिक नेतृत्वको अभ्यासका लागि अन्तर विरोध देखिएको बताए । नेता मण्डलले ओली नेतृत्वको सरकार कांग्रेसले चलाएको सरकारकै शैलिमा अघि बढेकाले त्यसको खबरदारी गरिएको समेत बताए ।
म्याग्दी पहिरो : थप १ जनाको शव फेला, मृतकको संख्या २८ पुग्यो